Aqoon isweydaarsi looga hadlayay sida ugu haboon ee loo heli karo doorasho nabdoon oo lagu qabtay Gaalkacyo - Idman news
Dood wadaagaan ayaa ahaa mid looga hadlayay taageerida doorashooyin nabdoon iyo xoojinta doorka bulshada rayidkaa isla markaana ay soo agaasimeen dallada jilayaasha aan dowliga aheyn ee Soomaaliyeed ee SONSO oo gacan ka heleysa machadka dimuquraadiyada iyo doorashooyinka qaarada Afrika ee EISA ayaa maanta lagu qabtay magaalada Gaalkacyo iyadoona ay ka qeyb galeen Mas’uuliyiin iyo xubno matalayay bulshada qeybahooda kala duwan.
Duqa Degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale ayaa ugu horeyn ka hadlay furitaanka dood wadaaga isagoona sheegay in ay ka mahad celinayaan dadaalada loogu jiro qabsomida doorasho xor iyo xalaal ah.
Guddoomiyaha ururka haweenka Gobalka Mudug ee Galmudug Maymuun Cali Nuur Geyfane ayaa iyaduna xustay in loo baahan yahay ka shaqeynta doorasho si nabdoon uga qabsoonta Gaalkacyo.
Dood wadaagaan ayaa sidoo kale intii uu socday waxaa si toos ah su’aalo ku aadan hanaan ugu haboon ee loo heli karo doorasho nabdoon oo la siman yahay lagu weydiiyay qaar ka mid ah xubnihii ka qeyb galay kuwaas oo kala matalayay culumada waxgaradka iyo haweenka iyadoona ugu danbeyn laysku waafaqay in lama huraan ay tahay in la helo doorsho xor iyo xalaal ah lana tageera hanaan socodaka doorshada dalka.
Previous articleMadaxweyne ku-xigeenka Puntland oo hoygiisa ku booqday Beeldaaje Cali Beeldaaje
Previous Maxay ka wada hadleen Rooble iyo wafdigii QM? + Sawirro
Next Sarkaashiisii ugu sareysay cidanka Ahlusunna oo laqabtay iyagoo dhaawac ah +SAWIRRO